लग्जरीको जमानामा ‘टायरगाडा’ मा जन्ती
Sun, 16 Dec 2018 Website Radio|Powered by AB Group Pvt. Ltd.
टुडे समाचारदाता फाल्गुन २५, २०७४
राजेश केसरीवाल , रक्सौल । यस्तो पनि जन्ती । हेर्नेहरुले हेर्दै रहे । सफारी, स्कार्पियो, सुमोभन्दा महँगा गाडीको प्रदर्शन जन्तीको पैmशन बनेको छ । बढी गाडीको लस्कर लिएर जाँदा बेहुली पक्षमा कुटुम्ब सम्पत्तिबाला रहेको सन्देश जाने बेहुला पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले बेहुला पक्ष बढी गाडीको लस्कर लिएर जान रुचाउँछन् । बैलगाडा त टाढै रहोस्, लस्करमा थोत्रो छ भने गाडी फिर्ता गर्न बेहुला पक्ष समय लगाउँदैन् । नाम समेत बिर्सिन थालेको बेला छिमेकी राष्ट्र भारतको रक्सौलमा लामो समयपछि टायरगाडा सम्झेको छ । टायरगाडा लस्कर लिएर बेहुलापक्ष बेहुली ल्याउन निक्लेपछि सर्वत्र अनौठो मानिएको थियो । इन्जिनयुक्त सवारीसाधनले विस्थापित गरिसकेको टायरगाडाको लस्कर पनि यतिको मनमोहक हुन्छ भने साबित गरेको छ । वैवाहिक कार्यक्रमलाई स्मरणीय र यादगार बनाउने सबैको चाहना हुन्छ । स्वभाविक पनि हो जीवनमा एकपटक यो साइत जुड्ने गरेको छ । यसलाई स्मरणीय बनाउन कोही पछि पर्दैनन् । गाडीको लस्कर लिएर विहे गर्न जाने समान्य वन्दै जाँदा रक्सौलका रामनाथ साहका छोरा अनिल कुमारले आप्mनो वैवाहिक कार्यक्रमलाई स्मरणीय बनाउन अलग गरे । उनी बिना गाडीको विहे गर्न बेहुलीको घरतर्पm लागेका थिए । टायरगाडामा सवार भएर गएका अनिलको पछाडी जन्ती पनि टायरगाडामै सवार थिए । रंगरोगन गरी सज्जाइएको टायरगाडाको लस्कर निक्लिदा कुनै हिन्दी फिल्मको शुटिङको दृष्य जस्तै स्पोट बनेको थियो । रीलको लागि होइन, रियल(सही) को लागि उक्त टायरगाडाको लस्कर निक्लेको थियो ।बेहुला अनिलको जन्तीमा परम्परागत संस्कृति, लोक पहिचान र भोजपुरी पहिचानको पर्यावरण संरक्षणको अनुपम समागम देखियो । टायरगाडामा जन्ती गएको नौलो होइन् । तर, आधुनिक युगमा लग्जरी गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको बेला अनिलले अपनाएको शैली कम खर्चिलोका साथै लोप हुँदै गएको टायरगाडाको सवारी पनि मानिसको मानसपटलमा ताजा गराए । जन्तीमा लैजानको लागि टायरगाडाको व्यवस्थापनमा जुटेका बेहुलाका मामा मंजु साहलाई ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्यो । बढी संख्यामा टायरगाडा जुटाउनै समस्या । कहाँबाट ल्याउने ? आसपासका गाउँहरुबाट गरेर एक सय टायरगाडा जन्तीको लागि तयारी गरेको साहले दावी गरे । आसपासमा मानिसहरुले गिन्ती भन्दा हेरेरै रमाइलो गरे । आदर्श विवाहलाई ऐतिहासिक र स्मरणीय बनाउनको लागि टायरगाडाको व्यवस्थाप गरेको उनले थपे । टायरगाडाले ग्रामीण परम्परा र सभ्यतालाई पुर्नजिवित गर्ने सार्थक प्रयासको हेर्नेले प्रशंसा गर्न पछि परेनन् । टायरगाडामा लगाइएको रंगविरंगी कपडा, पगडीमा सज्जिएका बहलवान(चलाउने व्यक्ती) र गोरु शाही अन्दाजमा थियो । जन्तीमा सहभागी राजद नेता प्रमोद रायले वास्तवमा यो अनौठो र सराहनीय पहल रहेको बताए । यस प्रकारको पहलको बढाबा जरुरी छ, उनले भने । प्रो. वीरेंद्र कुमार र सास बहू (सासु बुहारी) प्रतिष्ठानका संचालक राज कुमार गुप्ताले पनि यसलाई स्मरणीय र प्रेरक पहल बताए ।